Sawirro: Muxuu ku saabsanaa kullanka Kheyre iyo Howlwadeenada Xafiiskiisa - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Muxuu ku saabsanaa kullanka Kheyre iyo Howlwadeenada Xafiiskiisa
Sawirro: Muxuu ku saabsanaa kullanka Kheyre iyo Howlwadeenada Xafiiskiisa
Muqdisho (Caasimada Online)-Ra’isul wasaaraha Xukuumadda Somalia Xasan Kheyre ayaa goordhow kulan kadis ah la qaatay howlwadeenada Xafiiskiisa.
Ra’isul wasaare Kheyre ayaa Howlwadeenada kala hadlay Hanaanka uu ku shaqeyn doono Xafiiskiisa maadaama maamulkii hore uu meesha ka baxay.
Kheyre waxa uu marka hore ka dalbaday Howlwadeenada inay laba jibaaran shaqooyinka ay u hayaan Qaranka waxa uuna meesha ka saaray inuu yahay shaqsiga loo shaqeynaayo waxa uuna cadeeyay in waxa loo shaqeynaayo uu yahay Qaranka.
Ra’isul wasaare Kheyre waxa uu sheegay in Howlwadeenada iyo isaga ay kala badbaadi doonaan haddii la helo ilaalinta wakhtiga iyo shaqada, maadaama howl badan ay u taallo.
Xasan Kheyre ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono sidii ay u heli lahaayeen Howlwadeenada xuquuqdooda, iyagana lagula xisaabtami doono shaqada ay ummada u hayaan, ayna qeyb ka tahay qorshaha isla xisaabtanka ee Dawladda.
Waxa uu ku baaqay in lala shaqeeyo si uu ugu dhiirado qabashada Howlaha horyaal.